Ihe Nlere Anya: Vidiyo na Nweta Media | Martech Zone
Omume ndị a na-ahụ anya na-enye ndị ụlọ ọrụ na ụdị ndị buru ibu ohere iji kesaa ọdịnaya ha nye ndị na-ekiri ha dị mkpa. Uzo elu ha ruru ihe karịrị 380 nde ndị na-ekiri vidio kwa ọnwa. Ruo taa, ha atụleela ijeri vidio vidio atọ, ihe karịrị narị nde vidio 3, na ihe karịrị puku vidio mgbasa ozi 500.
Ihe a na-ahụ anya na-anapụta mgbasa ozi vidiyo ziri ezi nye onye ziri ezi n'oge kwesịrị ekwesị na onye mbipụta ziri ezi, na-enyere ndị mgbasa ozi ika aka ịlụ ọgụ na mgbasa ozi mgbasa ozi ma na-achọpụta ndị na-ekiri ha.
Omume ndị a na-ahụ anya arụpụtawo usoro metrik arụpụtara nke ndị Council Rating Council nakweere, otu ụlọ ọrụ na-enyocha ma na-ekwenye ọrụ ọrụ mgbasa ozi:
Ezi Iru ™: MRC nke ụwa kwadoro ịrụ ọrụ metrik izizi maka akwụ ụgwọ, nke nwere, na akwụ ụgwọ mgbasa ozi.
Oke nke Nhọrọ ™: A-ụdị ụdị ihe eji eme ihe iji tụọ arụmọrụ akara ngosi na vidiyo dabere na nhọrọ.
Njikọ vidiyo: Usoro arụmọrụ nke na-egosi otú ndị mmadụ si emekọrịta na ọdịnaya vidiyo egosipụtara.
Omume ndị a na-ahụ anya na-ejide mkpọsa vidiyo maka ọtụtụ ndị mgbasa ozi kachasị emetụta ụwa, dịka P&G, Ford, Microsoft, na Unilever, yana ụlọ ọrụ mgbasa ozi dịka Starcom MediaVest, Mindshare, na Omnicom, Visible Measures na-ejide ọnọdụ dị iche na ụlọ ọrụ vidiyo.
Tags: akwụ ụgwọ mgbasa oziVidio Ahịaòkè nke okeeziokwu irumgbasa ozi vidiyonchịkọta vidiyonkesa vidiyovideo akaihe a na-ahụ anya
Guubie: $ 59 Kwa Afọ Email Marketing Platform